Musuqmaasuq ama laaluush Waa cudur aan daawo lahayn | Explorations in History and Society
August 29, 2016 by africorruption
Saameyn intee la’eg ayaa ka dhalan karta lacagtii laga xaday Bankiga Dhexe?
August 29, 2016 –Markii ugu horeysay Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Dalka Bashiir Ciise Cali ayaa Khamiistii aynu soo dhaafnay wuxuu shaaciyay in Qasnada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Bankiga Dhexe laga xaday lacag dhan $ 530,000, waxaana uu ku eedeeyay arintaasi in uu ku kacay Qasanajigii hayay furaha Bankiga Dhexe ee Dalka.
Wuxuu sheegay Laamaha amniga ee Dowladda, Nabad Sugidda iyo CID-da in ay ku wargeliyeen shaqsigaasi lacagta ka xaday Bankiga Dhexe si ciidanka amniga ay gacanta ugu soo dhigaan.
Bashiir Ciise Cali Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ayaa sidoo kale sheegay lacagta lagala baxay Bankiga Dhexe in loo maray in lacag faalso ah la geliyo Qasnada Dowladda lacagta nadiifka ahna lagala baxay, balse baaritaan ay sameeyeen kadib arintaasi ku ogaadeen.
Iyadoo xilligan Dalka uu ku jiro Marxalad kala guur ah islamarkaana Dalka uu isku diyaarinayo Doorashada Madaxtinimada ayaa xubnaha Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya waxa ay sheegeen iyagoo ka falcelinaya lacagata lagala baxay Bankiga in ay u yeereen Gudoomiyaha Bankiga Dhexe Bashiir Ciise Cali si ay wax uga weydiiyaan lacagta lagala baxay Bankiga Dhexe.
Geesigii Maxamed Cabdulle Xasan “Sayyidka” oo halgan ku xeel dheeraa, gabayadana ku caan baxay ayaan maqlay in uu yiri: “Musuqmaasuq Soomaali waa Meheredoodii, Kolba Midab ayay kula Imaan Maalin iyo Leel…”Sayyidka waxuu geeriyooday sannadka markuu ahaa 1920 kaddib markuu la dagaalamay muddo labaatan sano isticmaarka. Waxaa la yiraahdaa: “Soomaalida Been waa Sheegtaa, Laakin Been kuma Maahmaado.”
Wakiilka AP waxuu warkiisa ku daray in Safaaradda Maraykanka ay ku sheegtay war-saxaafadeed “in ay la qabto Ururka Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay walwalka ku aadan in ay ka jiraan ‘warbixinno badan oo la rumeysan karo oo ka hadlaayo handidaad iyo musuqmaasuq’ xulidda xubnaha Baarlamaanka dalka.”Madax meel ka sareyso haddiis jirin madaxda Midowga Afrika iyo kuwa Qaramada Midoobay iyo Maraykanka cid ka sareyso ma jiri karaa? Haddii ay intooda isku raaceen iyo waxii kale meelahaas laga shee-sheegaayay, madaxweynehii ka soo baxo doorashada maalmo gudahooda la qaban doono, waxii ka soo baxo waxii ay noqon doono Ilahay ayaa yaqaan.Qof kursigiisa lacag ku gatay cidna – dad ama dal – ixsaan uma haayo. Xubinkii Baarlamaanka haddeer dhashay oo intaan la buun-buuninaayay in uu ahaado qof nadiif ka ah waxyaalaha dalka la degay, hadduu igu noqdo asigana mid calooshiis u shaqeyste ah, marka ummadda maxaa u ugu haray keydkeeda.
Sawiro: Meydka Generaal Samatar oo Godka la dhigay & Hogaamiyasha Somalida oo ka qeyb galay.. The known unknowns about The Somalis